१२ बर्षदेखिको वेवारिसे भवन कसको ? विवादास्पद भवनमा राजनीतिक शक्तिको गिद्धे दृष्टि !
– पवन फुँयाल, भक्तपुर ।
मध्यपुरबाट भक्तपुर सूर्यविनायक जाने अरनिको राजमार्ग राधेराधे नजिक भाटभटेनीसँगैको १७ तले निर्माणाधिन भवन कसको हो ? भन्नेमा धेरैको चासो र जिज्ञासा हुने गरेको छ । झण्डै १२ बर्षदेखि वेवारिसे जस्तै बन्दै आएको उक्त भवनका बारेमा विभिन्न खालका अड्लबाजी काटिएका छन् । कसैले यो भवन व्यापारी वा उद्योगी व्यवसायीले व्यापारिक प्रयोजनले निर्माण गरेको लख काटिरहेका बेला कसैले भने आवासगृह (कम्प्लेक्स) प्रयोजनले निर्माण गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् । तर २०६५/०६६ सालमा नक्सा पास भएर निर्माण प्रारम्भ भएको उक्त भवन अहिलेसम्म पनि पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न किन हुन सकिरहेको छैन त ? सबैको कौतुलताको बिषय बनेको छ ।
केही समय अगाडि भारतीय चलचित्र अभिनेता गोविन्दा अहुजाले नेपाल भ्रमण आएका बेला उक्त भवनको अवलोकन गरेका थिए । गोविन्दाले अवलोकन गरेका कारण कतै गोविन्दाको लगानीमा त उक्त भवन निर्माण गरिएको होइन ? भनेर धेरैले अनुमान पनि लगाएका थिए । तर जानकारहरुका अनुसार उक्त भवन भारतीय चलचित्र अभिनेता गोविन्दाको प्रत्यक्ष लगानीमा निर्माण भएको होइन, बरु उक्त भवन निर्माण गर्ने नेपालीहरुको गोविन्दा आफन्त भएका कारण उनलाई उक्त भवनको अवलोकन गराइएको हो ।’ उनीहरुका अनुसार गोविन्दालाई उक्त भवन अवलोकन गराइसकेपछि व्यापारिक रुपमा भवन बेच्न सजिलो हुने भएकाले निर्माणकर्ताले उक्त रणनीति अपनाएका हुन सक्दछन् ।
२०६५ सालमा ५ तलाको मात्र निर्माण स्वीकृति पाएको उक्त भवन निर्माण बिना स्वीकृति धमाधम संरचना निर्माण भएपछि स्थानीय प्रशासनले उक्त भवन निर्माणमा रोक लगाएको हो । त्यतिबेला ५ तलाभन्दा अग्लो भवन निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । सोही कारण ५ तलासम्मको बनाउने उद्देश्यले उक्त भवन निर्माण गरिएको देखिन्छ । जब २०६७ मा नगरपालिकाले (फार सिष्टम) लागू ग¥यो, तब भने अग्ला भवन निर्माण गर्न पाइने नियम बन्यो । त्यसपछि २०६७/६८ सालमा यो भवन १७ तल्ला निर्माण गर्नेगरी तयारी भयो । सोही मुताविक २०६९ सालमा नयाँ नक्सा दर्ता गरियो । नगरपालिकामा नक्सा पासका लागि दर्ता त गरियो, तर नगरपालिकाले भवन निर्माणको नक्सा पास गरेको थिएन । किनकी उक्त भवन निर्माण गर्दा स्थानीयवासीहरुसँग निर्माणकर्ताले गरेको सहमति तोडेर भवन निर्माण कार्य भएको थियो । त्यति मात्र होइन, नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डविपरीत उक्त भवन निर्माण भएको उजूरी नगरपालिकामा परेपश्चात नगरपालिकाले भवन निर्माणमा रोक लगाएको थियो । तर नगरपालिकाको रोकलाई समेत वास्ता नगरी परम्परात रुपमा रहेको राजकूलो र सार्वजनिक बाटो नै मिचेर धमाधम भवन निर्माण कार्य भइरहेको थियो । नगरपालिकाका तत्कालिन इन्जिनियर सुरेन्द्र श्रेष्ठ आफ्नो पालामा ५ तलाको मात्र नक्सा पास गरेर धमाधम भवन बनाउँदा नगरपालिकाले निर्माणमा रोक लगाएको बताउँछन् ।
हालका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका कान्छा छोरा स्वराज पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्कर अली लगायतले उक्त भवनको स्वामित्व आफ्नो नाममा ल्याउन लागिपरेको बताइएको छ । त्यसो त यी सबैको बीचमा केन्द्रीय भूमिकामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको समेत संलग्न रहेको आशंका गरिएको श्रोतको दाबी छ ।
२०६५ सालमा भवन निर्माण गर्न अनुमति लिँदा उक्त भवनमा विष्णु न्यौपानेको स्वामित्व रहेको देखिन्छ । तर अहिले यो भवन र जग्गाको स्वामित्व शुभश्री जगदम्बा डेभलपर्सको नाममा रहेको छ । डेभलपर्सका प्रमुख सञ्चालक अंकुर न्यौपाने र सञ्चालकहरूमा दिवस न्यौपाने र उत्सव न्यौपाने छन् । काठमाडौको तीनकुनेस्थित न्यौपाने टावर समेत यिनै न्यौपानेहरुको स्वामित्वमा छ । सुरुमा न्यौपानेको व्यक्तिगत नाममा रहेको यो भवन पछिल्लो समय नगरपालिकामा कागजात पेस गर्ने बेला भने संस्थाका नाममा पुगेको देखिन्छ । अहिले यो भवनको नक्सा पास गर्न निवेदन परेपनि नक्सा भने पास भएको छैन । त्यसो त नगरपालिकाले ल्याएको नयाँ नियम अनुसार ‘फार’ मिलाउन भवनधनीले पछाडिको भागको जग्गा किनिसकेको समेत बताइन्छ । उक्त भवनलाई मापदण्डभित्र पारेर नक्सा पास गराउन यतिवेला जग्गाधनी लागि परेका छन् ।
पछिल्लो समयमा उक्त भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गर्न नगरपालिकामा समेत दबाब र प्रभाव दुवै पार्न थालिएको बुझिएको छ । राजनीतिक शक्तिको संरक्षणको नाममा भवन मालिकहरुले वडाका वडा अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुखलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पारेर जसरी पनि नक्सा पास गराउने दाउमा लागेको पाइएको छ । यस बिषयमा नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल ज्ञवाली भने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । आफू ३ बर्षसम्म नगरपालिका कार्य गर्दा कार्यकालमा यो बिषमया कुनैपनि छलफल र निर्णय नभएको ज्ञवालीको तर्क छ । तर जानकारहरुका अनुसार उक्त भवनकै नक्सा पासका बिषयमा भएको आर्थिक चलखेल र मोलमोलाइमा कुरा नमिलेपछि नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ र ज्ञवालीबीच मनभेद सिर्जना भइ ज्ञवालीको सूर्यविनायक नगरपालिकामा सरुवा गरिएको बताउँछन् । श्रोतका अनुसार ‘वडा अध्यक्ष र मेयरलाई करोडौं लेनदेन गरेर जसरी पनि काम गर्ने भनेर विभिन्न गिरोह लागिपरेको बताइन्छ । यस बारेमा बुझ्न खोज्दा नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
यता उक्त विवादलाई ढाकछोप गरी गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएको भवनलाई वैधता दिने कार्यमा केन्द्रीय तहकै राज्यसत्ता समेत लागिपरेको खुलासा भएको छ । हालका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका कान्छा छोरा स्वराज पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्कर अली लगायतले उक्त भवनको स्वामित्व आफ्नो नाममा ल्याउन लागिपरेको बताइएको छ । त्यसो त यी सबैको बीचमा केन्द्रीय भूमिकामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको समेत संलग्न रहेको आशंका गरिएको श्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय राज्यसत्ताका वरिपरि रहेका व्यक्तिहरुले उक्त भवन आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनलाई भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका समेत चर्चा चलिरहेका बेला विवादास्पद भवन आएपछि भवन निर्माण कार्यलाई वैधता दिलाउन सजिलो हुने अपेक्षाले उनीहरुलाई उक्त भवनको स्वामित्व दिलाउन भवनका सञ्चालनकहरु स्वयं लागिपरेको बताइएको छ । शक्तिको आडमा जसरी पनि मापदण्ड विपरीत तथा गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएको उक्त भवनलाई वैधानिकता दिने कार्यमा केन्द्रीय राज्यसत्ताकै संरक्षणमा दबाब सिर्जना गर्न थालिएकोमा सर्वत्र चर्काे आलोचना र निन्दा समेत भइरहेको छ ।
यसैबीच यति लामोसम्म नक्सा पास नगरी रोकेर राखिएको उक्त भवनको नक्सा पास आफ्नो कार्यकालको अन्तिम अवस्थामा आएर पास गर्ने मनस्थितिमा नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बनाएको समेत श्रोतको दाबी छ ।